Natural Way To Whiten Teeth | Way Best inay Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn
Posts tagged "hab dabiici ah in ay u caddayn ilkaha"
Jidka Dabiiciga ah inay u caddayn Ilkaha Easy
Haddii aad rabto in aad hab dabiici ah in ay u caddayn ilkahaaan iibsan dhammaan kuwa xirmooyinka qaali, kaliya ku noqo kaaa jeer. Isticmaal daawooyinka guriga in ayeeyo iyo hooyadeed hore u ogeyd. Haddii uu jiro xanuun ah, xanuun, cut, ama wax kale, waxaa had iyo jeer ahayd xal ama daawo lana soo armaajada ku meel. Isla khuseysaa caddeeyo ilkaha. Tixgeli hab dabiici ah in ay u caddayn ilkaha hoose oo la yaabeen natiijada kuwa loo isticmaalo.
Haddaad jeceshihiin strawberries iyo dabcan ma xasaasiyad waa in, sameeyaan qaar ka mid ah shortcake strawberry iyo caddeeya aanu u caddayn ilkaha waqti isku mid ah. Strawberry waa a hab dabiici ah in ay u caddayn ilkaha. Just gooyaa strawberry weyn qeybtii oo meel afkaaga. Hubi gudaha waa afkaaga gudaha. Xoq oo dhan in juice strawberry yummy iyo strawberry oo dhan ilkaha ilaa ay dhan daboolay pink. Sug wanaagsan toban daqiiqo ka dibna isticmaal daawada ilkaha. Your cadayga dabcan waa in ay ahaataa oo dhan dabiiciga ah iyo ma abrasives ama saamayn kale waxyeello. Iyada oo ku xidhan sida cad aad rabto, taas samayn laba jeer maalintii marka aad laba jeer cadayo maalintii. Ku samir, maalin walba waxaad arki doontaa ilkaha si dabiici ah caddaan. Tani waxay sidoo kale caawin doona Wasaqda qaxwada iyo wax kasta oo kale si loo yareeyo Wasaqda on ilkaha.
Waxaa laga yaabaa in aad maqashay baking soda ilkaha. Haddii aadan haysan, markaas waa inaad aad u tahay, aad u yar. Qof kasta oo in ka badan afartan iyo konton jirka waa ogyahay hooyo ama ayeeyo in baking soda waa hab dabiici ah in ay u caddayn ilkaha by kaliya cadayashada ilkaha. Haa, waxaa laga yaabaa in cadayga loo isticmaalay. Laakiin, haddii aad lahaa waalidiinta jiilka ka weyn, baking soda had iyo jeer ahaa liiska. Haa waa run ahaantii ma shaqayn iyo waa aan hadal haynta. Isticmaal oo keliya rubuc markii cadayashada ilkaha maadaama ay tani waa a hab dabiici ah in ay u caddayn ilkaha. Just aad caday qoyan oo waxaad dartaan gelin baking soda ah. Ka dib cadayashada in meesha laga saaro dhadhanka, isticmaalaan oo dhan afka dhaqmo dabiici ah in dareen minty nadiif ah. Hadda, waxa keliya ee aad baratay oo aad u jir qabanqaabiyey hab dabiici ah in ay u caddayn ilkahaguriga.
oo dhan Waxaan u isticmaali khal si aad u nadiifiso la. waxyaabaha The nadiifinta aad ka iibsan leeyihiin khal waa in meel, haddii ay si dhab ah oo dabiici ah. Anyway, hab dabiici ah in ay u caddayn ilkaha at guriga, isticmaal oo keliya oo khal cad ah oo ku saabsan nus koob. Sidoo kale ku dar oo ku saabsan qaado cusbo ah haddii aad rabto. cusbo wuxuu ka caawiyaa adkeeyo ilaa ciridka in ay yihiin xasaasi ah iyo dhiig. Waa daawaynta dabiiciga ah si ay u caawiyaan. Ka hor inta aadan seexan habeenkii, kaliya u isticmaal sida dawo luqluqasho iyo biyo raaci si fiican. Ilkahaaguna noqon doonaan xoog iyo tusi dhoola ah oo qurux badan.
Haddii runtii waxaad tihiin caajis iyo barashada hababka oo dhan sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha guriga u muuqataa mid aad u adag, kaliya isticmaalaan daawada cadayga, reexaanta. Isticmaal ugu yaraan laba ama saddex jeer maalintii. Ilkahaaguna hubaal doono si dhakhso dhalaalaya. Waxaad sidoo kale isticmaalaysa kartaa internet-ka si ay u soo ururin macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan fikradaha ku saabsan hab dabiici ah in ay u caddayn ilkaha.
Posted by Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn - June 4, 2016 at 11:57 PM
Categories: Caddeeya aanu u caddayn Talooyin Ilkaha Tags: hab dabiici ah in ay u caddayn ilkaha, strawberry, cadayga, ilkaha caddeeya